Jimicsiyada Fahamka Akhriska ee Bilaashka ah - Tababbarka Garashada
Layliyo onlayn ah oo ku saabsan fahamka akhriska
Hawlaha qaarkood ayaa socda akhris iyo faham:
Raadi ereyo qaldan
Jumladaha ugu yar
Hadal caam ah
[PDF] Duckling fool xun: sheeko ka kooban 13 qaybood oo leh hawlo fahan
Sheekada duck foosha xun oo loo qaybiyay 13 qaybood.
Qayb kasta, dhamaadka marinka, waxaad ka heli doontaa su'aal ku saabsan eraybixinta iyo ereyada la galayo si loo dhammaystiro sheekada.
Dhamaadka sheekada, waxaa lagaa codsan doonaa inaad dib u habeyn ku sameyso dhacdooyinka sheekada oo aad ku qorto anshaxa ereyadaada.
Nooca isdhexgalka: ammarkii 1 -ammarkii 2 - ammarkii 3 - ammarkii 4 - ammarkii 5 - ammarkii 6 - ammarkii 7 - ammarkii 8 - ammarkii 9 - ammarkii 10 - ammarkii 11 - ammarkii 12 - ammarkii 13 - Dhacdooyinka habee - Aynu ka fikirno qaamuuska
[PDF] Laakiin maxaad leedahay? 10 xaashiyo xaqiiq ah oo bilaash ah oo ku saabsan caqliga iyo sababaynta
Xilliga wararka been abuurka ah ayaa ka muhiimsan sidii hore si loo falanqeeyo weedhaha loona fahmo sababaha asaasiga ah. Ma jiraa qalad bilow ah? Wax kasta oo aynaan ka fiirsan? Kaadhadhkan waxaad ka dhex arki doontaa 10 sababood oo khaldan, oo aan aad uga fogayn kuwa aad maalin kasta akhrisato oo aad maqasho. Dhammaantood ma xallin kartaa? Boggan.
raadadka, fahamka qoraalka, dyslexia, reading
Layliyo onlayn ah oo ku saabsan fahamka akhriska2020-10-262020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngTababbarka garashadahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2019/01/comprensione-del-testo.jpg200px200px
Falanqaynta Naxwaha: Leyliyo Online ah oo Bilaash ahQashin-